Samsung Galaxy Ace iyo Samsung Galaxy Mini, oo ah laba taleefan casri ah oo casri ah oo loo yaqaan 'android smartphone' ee Spain | Androidsis
Samsung Spain ayaa hadda ku dhawaaqday in lagu daro laba terminal cusub oo ku jira buugiisa casriga ah nidaamka Android ee laga helo Spain, waa Galaxy Ace iyo Galaxy Mini, qoyska Galaxy ayaa kora oo kora. Laba terminaal dhexdhexaad ah oo dhammaystira xaddiyadaha terminalka shirkadda Kuuriya.
1 Samsung Galaxy Ace, riyada xagaaga iPhone
2 Samsung Galaxy Mini, mini runtii.
Samsung Galaxy Ace, riyada xagaaga iPhone
Terminalkan aan ka faalloonay u ekaanshihiisa dibadeed ee aan caadiga ahayn ee IPhone-ka cusub ee Apple wuxuu gaarayaa suuqa Isbaanishka in kasta oo dibedda muuqaalkeedu u eg yahay mid macquul ka ah iPhone-ka, waa halka uu ku dhammaado. Bari Android casriga ah Waa meel dhexdhexaad ah oo leh shaashad 3,5-inji ah oo ah TFT-LCD iyo xallinta 320 of 480 pixels. Naftiisu waa processor Qualcomm processor ah xawaare dhan 800 Mhz inkasta oo ayna ahayn kii ugu dambeeyay ee processor-rada hadana waxaan isleenahay waxay ka badnaan doontaa in si raaxo leh loo wado nooca Android 2.2 ama Froyo oo ah kii aan imid aniga oo rakibay.
Dabcan Galaxy Ace waxay leedahay dhammaan noocyada isku xirnaanta, Wifi 802.11 b / g / n, Bluetooth, A-GPS, booska kaarka SD-ga yar iyo daboolka madaxa. Uma maqna midkood xawaaraha sare ama dareemayaasha dhawaanshaha iyo kumbuyuutarka wareega. Dhammaan dhinacyada ay u baahan tahay Google si ay u awoodaan inay ku rakibaan Suuqa Android-ka heer ahaan iyadoo ay ka badan yihiin 200.000 oo codsiyo la heli karo.
Dhabarka gadaashiisa waxaan ka heleynaa kamarad 5 Mpx ah oo leh autofocus iyo LED flash, in ka badan inta ku filan isticmaalka caadiga ah ee kamaradda noocan ah ee Smartphone.
Samsung Galaxy Mini, mini runtii.
Terminal Mini ah oo loogu talagalay kuwa u baahan taleefan casri ah oo raaxo leh in la qaado, iftiin laakiin isla mar ahaantaana awood u leh inay ku xirnaadaan 24 saacadood maalintii. Ha fileynin teknolojiyada ugu dambeysa laakiin noocyo qeexitaan ah oo ka dhigaya taas oo ay weheliso qiimaheeda (taas oo aan u maleyno inay noqon doonto mid aad u hooseysa) waxay noqon doontaa xulashada la doortay ee dad badan.
El Samsung GalaxyMini Waxay leedahay shaashad 3,14-inch ah iyo qaraar dhan 320 × 240 pixels. Processor-keedu wuxuu ku socdaa xawaare dhan 600 Mhz iyo inta dhabarka ku leh kamarad 3 Mpx ah oo aan lahayn flash ama autofcous.
Its A-GPS, isku xirka Bluetooth iyo Wifi 802.11 b / g / n way ka badnaan doonaan si noloshaada shabakadaha bulshada aysan u kala go'in. Tan tan waa inaan ku darnaa xawaare, kumbuyuutar kumbuyuutareed iyo dhawaansho si aan u dhammaystirno tilmaamaha ugu muhiimsan ee cusub GalaxyMini.
Waxay ku timaaddaa Android 2.2 iyo helitaanka codsiyada jira ee Suuqa Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Ace iyo Samsung Galaxy Mini, oo ah laba casriga casriga casriga ah ee dalka Spain
«Wax walba way dhammaadeen» ...
Ku jawaab yaa
waan ka xumahay, laakiin erayga hubiyaha mararka qaarkood wuxuu ciyaaraa xeelado
Labadaas terminaal ee aad ka faallooto looma soo bandhigin suuqa Isbaanishka. 🙂
Ugu dambeyntiina, laba koox oo laga yaabo inay awoodi karaan iyagoo aan iibin kelyaha.
Salaan ka timid Argentina iyo Nasiib
Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad iga caawiso sidii aan xoogaa dulsaar ah ugu rakibi lahaa Samsung Galaxy Ace, waxaan ka baqayaa inaan dhibaato sameeyo mana dhiirigaliyo, fadlan ii soo jawaab !!
Waxaan leeyahay koox isku mid ah oo idinka iyo inaad mawduucyada dhex dhigtaan suuqa isla markaana halkaas ka soo dejista iyaga uun ku rida ereyga bilowga mashiinka wax raadinta ee suuqa oo aad mar horeba mid doorateen oo iyagu aad bay waalid u yihiin, goortaadna jeclayn inaad iska tirtirto ama riix batoonka bilowga waxaadna dooraneysaa furaha android-ka waana mid aad u fudud horayba ama sidoo kale waad soo geli kartaa maamulaha hawsha oo aad ku dhameysan kartaa dalabka hadana, waxaan rajeynayaa inaad fahantay oo ay shaqeyso
Ku jawaab minos
Fadlan ii sheeg sida aan u furi karo qalabka 'Samsun galaxy mini', waxaan u arkaa inay tahay inaan xidido laakiin fikrad kama haysto sida loo sameeyo taas.
Warka HoneyComb uu si faahfaahsan noogu keenayo
Ciyaaryahan Real ah oo loogu talagalay Android, beta cusub oo ah ciyaaryahanka multimedia